Waa'ee Gingilchoota Alaaguu fi Alerguu
LibreOffice keessatti, dhangiilee XML isaatin alatti, dhangiilee XML alagaa hedduu banuu fi ol kaa'uu dandeessa.
UNIX keessatti, dhangiiwwan faayilii tokko tokkoo ofumaan hin fudhataman. LibreOffice baratamaan gosa faayilii sirrii yeroo faayiliin banamu ofumaan fudhata.Yeroo gosa faayilii ofiikeetin filattu qaaqaBani keessatti mandheewwan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf, yoo gabatee kuusdeetaa dhangii barruuttin qabaatte kan immoo akka gabatee kuusdeetaatti banuu barbaaddu, erga faayilicha filatteen booda gosa faayilii "Barruu CVS" adda baasuun sirraa eegama.
Maakiroota Bu'uuraa Galmee Waajjiraa MS keessatti
Yaadannoota dhangiiwwan alaa fi akaakuuwwan faayilii ilaalchisee
Yoo ijaaramuu baatan illee, calaltuuwwan tokko tokkoo qaaqota Bani and Olkaa'i keessatti filatamuu danda'u. Yoo calaltuu akkasii filatte, ergaan ni mul'ata jechuun amma calaltuu ijaaruu dandeessa yoo barbaadde.
Yoo calaltuuwwan dabalataa ijaaruu ykn calaltuuwwan kophaa haquu ijaarsa irraa barbaadde, LibreOffice cufi, qindaa'ina sagantaa jalqabitii dirqalee Fooyya'aafili. Achiin qaaqa kan qabeentotaa kophaa LibreOffice ida'uu ykn haquu dandeessuu ilaalta. Calaltuun saxaatoo "Qabeentota Dirqalaa" keessatti argamuu danda'a.
Galmeewwan Barruu Alaaguu fi Alerguu
Alaaguun baratamaan rakkoo hin qaban. Yoo odeeffannoo fi too'annoon sararadiimaa alaagame illee(fi alergame)kanaaf LibreOffice barruu saagame ykn haqame galmeewwan jechaa akkasumas amaloota bocquu kan fooyya'e keessatti addabaasa. Haalluun addadda tokko tokkoo barreessaa fi yeroo jijjiirama sanaa itti dabalama. Yommuu saanduqoonni barruu saxaatoo fi asxaalee qajojiiwwan irra alaagame, amaloonni baay'een itti dabalees akka keewwata kallattii fi amaloota fakkasaatti alaagamu. Haa ta'u malee, amaloonnii tokko tokko yeroo adeemsa alaagii baduu danda'u.
Itti dabalees alaaguu fi alerguun ni dand'ama faayiloota RTF. Dhangiin faayilii kun barruuwwan dhanga'e fayyadamota fi gulantiyyoota baay'ee gamaa-gamana wal jijjiiruuf fayyaduu danda'a. Haala kanaan, dhangiiwwan baay'een sagantoolee baay'een dubbifaman rakkoo malee darbu. Gabatee muraan dhangii RTF fayyadama yommuu qaama waraqaadiriiroo LibreOffice Calc irraa keessa DDELibreOffice Writer keessatti saagdu.
Calaltuun Barruu Lakkaddaaye galmeewwan barruu bocquu lakkadda'uu biroo wajjin banuu fi olkaa'uuf si gargaara. Calaltuun qaaqa kan qindaa'ina arfii, bocqoota durtii, afaan fi citaa keewwataa filachuuf si dandeessisu bana.
Alaaguu fi Alerguu dhangiii HTML keessaa
LibreOffice Writerii wajjin, hubachiisa miiljalee fi ibsa dabalataa galmee HTML kee keessa saaguu dandeessa. Akka iyyosarmeetti alergamu. Hubachiisa miiljalee fi ibsa dabalataa akka geessituutti alergamu.
Arfii hin beekamne galmee HTML keessatti dabaluuf yaadannoowwan ni fayyada. Yadannoon hundi "HTML:..."n ka'uu fi ">"n xumuru akka lakkadda HTMLtti wal'aanama, garuu saxaxeessuu malee alergama. Iyyaatoowwan baay'een naannoo barruu "HTML:..." booda itti dabalamuu danda'u, arfoonni Maldan gara qindaa'ina arfii ANSI tti jijjiiramu. Yaadannoowwan yeroo alaaguu kalaqame(Fakkeenyaf, iyyosarmeef kan amaloota faayilii ykn iyyatoota hinbeekamne keessatti kutaa hin qabne).
Alaaguu HTML kan LibreOffice Writerii faayiloota lakkada arfii UTF-8 ykn UCS2 qaban dubisuuf dandeessisa. Arfoonni hundi kan qindaa'ina arfii ANSI keessatti argaman ykn kan sirna qindaa'ina arfii keessatti argaman mul'achuu danda'u.
Fakkeenyaaf, "Font: bold italic small-caps 12pt/200% Arial, Helvetica" yabbuu, itaalikii, qubeewwan xiqqaa, Iddoo-dachaa maatii bocquu Ariyaali fi Helvaatikaa wajjin, yoo Ariyaaliin hin jiraanne.
"Bocquu: 10pt" bocquu 10pt tti jijjira, yabbuun, itaalikiin, qubeewwan xiqqaa dhaamsi.
Yoo Aloolaa intarneetii MS fi LibreOffice Writeriin akka dirqalee alergiitti qindaa'e, hammamtaan dirree too'annaa fi keessi mudana isaanii akka akkaataawwaniitti alerga (dhangiiwwan maxxansi). Amaloonni hammamtaa CSS1 gatiiwwan "width" fi "height" irratti hundaa'u. Amalli "Margin" mudanoota walqixa hammamtoota fuula hundaa irratti qindeessuuf fayyada. Mudanoota adda addaa eyyamuuf, amaloonni "Mudana-Bitaa", "Mudana-Mirgaa", "Mudana-Gubbaa" fi "Mudana-Jalaa" ni fayyadu.
Fageenyi saxaatoolee fi Plug-Ins qabeentotaa LibreOffice Writer fi Aloolaa intarneetii MS tiif alergiif kopha kophaa qindaa'uu danda'u. Yoo mudanni gubbaa/jalaa ykn mirgaa/bitaa adda addaan qindaa'e, fageenyi dirqala "STYLE" keessatti iyyaatoo walitti dhufoof akka amaloota hammamtaa CSS1 "Mudana-Gubbaa", "Mudana-Jalaa", "Mudana-Bitaa" and "Mudana-Mirgaa"alergamu.
Dhangiiwwan barruu akka iyyaatoo"<SPAN>" ykn "<DIV>" alergamu yoo tarjoota qabaachuu baate. Yoo tarjoota qabaatan achiin akka "<MULTICOL>" alergama.
Maqaa Safartuu CSS1 keessaa
Lakkoofsa Olaantoo iddoowwan kurniyyee
Lakkaawwii Alaaguu fi Alerguu
Galumsi keewwataa bitaan lakkaawwii keessattii akka amala CSS1 "madana-bitaa" tti agarsiisama. Galumsootni sarara - duraa lakkaawwii keessatti tuffatama akkasumas hin aloolamu.
Faayiloota Wardii Alaaguu fi Alerguu
Alaagi fi alergii LibreOffice kutaalee haqaman fakkeenyaaf, kan akka tarjaa wabii ta`ame, wabii ta`a. Foormulaan hundi yeroo hojii alergii ilaaluu fi wabiin akeektuu (#REF!) wabiidhaaf ofkeessatti qabatu haqamuu danda`a. #REF! walqixxummaan wabiidhaaf yeroo alaagi uumama.
Faayiloota Saxaatoo Alaaguu fi Alerguu
Akka Galmeewwan HTML waliin, gingilchaa wajjin ykn maalimaa (LibreOffice Impress) malee maqaa keessatti faayilii saxaatooLibreOffice filuu ni dandeessa. Yoo maalimaa (LibreOffice Impress) malee ta`e, faayiliin akka galmee fakkasaa LibreOfficetti banama. Ta`uu baanaan, faayiliin sagantaa fooyya'aa moofaan Toleessaa LibreOffice keessatti banama.
Yommuu faayilii EPS alaagdu, durargiin saxaatoo galmee keessatti mul'ata. Yoo durargiin hin argamne, iddooqni walitti dhufoo hammamtaa saxaatoo galmee keessatti mul'ata. Uniiksii fi foddaalee maayikroosooftii jalatti maxxansaa BarruuDuubbeen fayyadamuun faayilii alaagame maxxansuu dandeessa. yoo maxxansaan adda addaa fayyade durargiin ni maxxanfama. yommuu saxaatolee EPS alerguu, duraargiin kalaqamee dhangii TIFF ykn EPSI qaba. yoo saxaatoon EPS saxaatolee biroo wajjin dhangii EPS keeessatti alergame achiin faayiliin kun ida'ama hin jijjiiramne faayilii haaraa keessatti.
Fuulli hedduu-TIFFs eyyamama yoo saxaatoleen dhangii TIFF keeessatti alaagame ykn alergame. Saxaatoleen akka tuuta fakkiiwwan tokko tokkoo faayilii baaqqee keessaa, fakkeenyaaf, fuulota tokko tokkoo faaksii akka turetti deebi'a.
Dirqaalee Fakkasa LibreOffice fi Impreessi LibreOffice Faayilii - Alergii keessa gahuu danda'a.
Galmee ykn saxatoo dhangii BarruuDeebee keessatti alerguuf:
Yoo hanga ammaatti hojjaatamuu baate, Ooftuu maxxansaa BarruuDeebee ijaari, kan akka ooftuu BarreessaaLeezarii Apple.
Galmee ajaja baafata File - Print wajjin maxxansi.
Maxxansaa BarruuDirbaasii qaaqa keessaa filadhu itti aansuun sanduuqa filannoo Faayilii irratti maxxansi mallatteessi. BarruuDirbaasiin ni uumama.
Title is: Waa'ee Gingilchoota Alaaguu fi Alerguu